Tronsmart Element Pixie ဘလူးတုစပီကာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Androidsis
တစ်ဖန်ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်လုပ်ရမည့်အချိန်ဖြစ်သည် အိတ်ဆောင်အသံ -related device ကို။ ဤအခါသမယတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Tronsmart ၏စျေးကွက်ထဲတွင်နောက်ဆုံးပေါ်လွှတ်တင်ခြင်း၏အကူအညီဖြင့်စမ်းသပ်ရန်လုံလောက်သည်။ The Tronsmart Element Pixie, ကျွန်တော်တို့ကိုအံ့အားသင့်ဖို့စီမံခန့်ခွဲတဲ့စပီကာ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးကွက်တွင်တွေ့နိုင်သောဖြစ်နိုင်ချေအမြောက်အများကြားတွင်ဘလူးတုစပီကာကိုရှာဖွေရန်ဆုံးဖြတ်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့သည်ရှုထောင့်ပေါင်းစုံကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ပထမ ဦး ဆုံးကြည့်တာကယုတ္တိကျကျကြည့်တဲ့အလေ့အကျင့်ပါ။ Element Pixie တွင်စွမ်းအားအပြင်အခြားအရာများစွာကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ဤနေရာတွင်သင်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့် ၀ ယ်နိုင်သည်။ Tronsmart Element ကို Pixie
1 ပါဝါ, ဒီဇိုင်းသို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်? ဘာလို့အားလုံးမဟုတ်တာလဲ။
3 အစိတ်အပိုင်းများအားဖြင့် Tonsmart Element ကို Pixie
ပါဝါ, ဒီဇိုင်းသို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်? ဘာလို့အားလုံးမဟုတ်တာလဲ။
သယ်ဆောင်ရလွယ်သောစပီကာ၏စွမ်းအားသည်အရေးအကြီးဆုံးမဟုတ်သော်လည်းအရေးအကြီးဆုံးအကျိုးကျေးဇူးများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်လက်ရှိစားသုံးမှုအမျိုးအစားတွင်၎င်းသည်အရေးမပါတော့ပါ။ ငါတို့လိုချင်တယ် ဘက်စုံသုံး, ကြကုန်အံ့ ဘက်ထရီနှင့်လည်းသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပင်လယ် ဆွဲဆောင်မှု.
ဖောက်သည်သည် ပို၍ တောင်းဆိုလာသည်။ ပြီးတော့ဒီအခြေအနေကထုတ်လုပ်သူအများစုကဒီထက်ပိုပြီးပြည့်စုံတဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုပေးနိုင်ဖို့ဒီကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားတယ်။ Tronsmart ဒီပို။ ပို။ ခက်ခဲသောစျေးကွက်အပေါ်အကြီးအကျယ်လောင်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်နှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာကမ်းလှမ်းရန်ကတိကဝတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် အရည်အသွေးအသံဆက်စပ်ပစ္စည်းများ.
Tronsmart Element Pixie သည်ဤထုတ်ကုန်များမှရရှိသောအရည်အသွေးနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်အသိအမှတ်ပြုထားပြီးဖြစ်သောဤကုမ္ပဏီမှနောက်ဆုံးထုတ်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်သည်။ နှင့်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အသစ်မိသားစုဝင် splurges ကောင်းသောအရသာ, ပါဝါနှင့်စတိုင် စတုတ္ထထောင့်အဘို့။ သင်သည် bluetooth စပီကာတစ်လုံး ၀ ယ်လိုပြီးစျေးကွက်ရှာဖွေရန်လိုပါက Tronsmart မှ Elemnt Pixie ကို Highlights များထဲမှရေးပါ။
ဒီဇိုင်းအပိုင်းမှာအရာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ပြီ။ အနာဂတ်နှင့်ရှုပ်ထွေးသောအကြားရောနှောဖြစ်ခြင်းအဆုံးသတ်ရလဒ်များကိုနှင့်အတူတီထွင်ဖို့ကြိုးစားသည်။ အောင်မြင်သော retro စတိုင်များနှင့်အခြားသူများသိပ်မ။ နှင့်အသစ်သောအရာတစ်ခုခုကမ်းလှမ်းလုံးဝလုံးဝဘာမျှမစွန့်စားခြင်းမရှိဘဲအမြဲတမ်းအတူတူလုပ်ဖို့ဆက်လက်သောကုမ္ပဏီများသည်။
Tronsmart မှသူတို့သည်စျေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်အလောင်းအစားများပြုလုပ်သည် ရှိသမျှသောကြွင်းသောအရာမှထွက်ရပ်တဲ့ထုတ်ကုန်။ အဆိုပါ Element ကို Pixie features တွေ ထူးခြားတဲ့ကင် စပီကာတည်ရှိရာအစက်နှင့်အတူ, လက်ဖြင့်ဖန်ဆင်းသည်။ ချောအရည်အသွေးနှင့်အတူ brimming ။ ငါတို့မြင်။ ငါတို့လက်၌ကိုင်ကြသောအခါ၊ ကျနော်တို့ကကောင်းစွာထုတ်လုပ်ထုတ်ကုန်ရင်ဆိုင်နေရကြသည်.
Su ခန္ဓာကိုယ်, သတ္တု rounded အရှေ့ဘက်တွင်ပလတ်စတစ်နှင့်ကျောဘက်တွင်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ကျနော်တို့ကဘယ်လိုရှိကွောငျးကိုကြည့်ပါ အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပရိသအလုပ် အရာအားလုံးperfectlyုံကိုက်ညီနိုင်အောင် အသေးစိတ်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတန်ဖိုးကိုလည်းသိနိုင်သည်။ ကျနော်တို့မှတ်ချက်ချသကဲ့သို့, ဒီအရည်အသွေးထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။
အစိတ်အပိုင်းများအားဖြင့် Tonsmart Element ကို Pixie
ထဲမှာ ထိပ်ဆုံး ငါတို့တွေ့ပြီ ဘက်ထရီအားသွင်းညွှန်ပြချက်, un Bluetooth သက်သေ ချိတ်ဆက်ဖို့ကြိုးစားနေစဉ်မျက်တောင်ခတ်သည်။ နှင့်အခြား "aux" အလင်း ကျွန်တော်တစ် ဦး device ကိုအရန် output ကိုချိတ်ဆက်သောအခါဖွင့်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဘယ်ဘက်မှညာသို့ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသည် ထိန်းချုပ်မှုခလုတ်များ။ ငါတို့မှာaခေါ်ဆိုမှုများကောက်ယူရန်ခလုတ်အဘို့နှစ်ခုခလုတ် အသံအတိုးအကျယ်ထိန်းချုပ်မှု, နှင့်မှတာဝန်ထမ်းဆောင်သောနောက်ထပ်တစ်ခု ပြန်ဖွင့် play သို့မဟုတ်ရပ်တန့် (play / pause) ။
၎င်း၏နောက်ကျော၌ငါတို့ရှာပါ ပါဝါခလုတ်ကို, ငါတို့သာဖွင့်သို့မဟုတ်ပိတ်ရန်နှစ်ခုစက္ကန့်ကိုနှိပ်ပါရန်ရှိသည်။ သူ့ကိုအနားမှာ connector ကိုအားသွင်းဤကိစ္စတွင်တစ် ဦး မိုက်ခရို USB။ ပြီးတော့ငါတို့ဆိပ်ကမ်းများရှာပါ "AUX" input ကို, အ output "OUT"။ ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း Tronsmart Element Pixie တွင်မည်သည့်အရာမျှပျောက်ဆုံးနေသည်။
၎င်း၏အစွန်း၌, သောဖြစ်ပါတယ် စပီကာ၏တစ် ဦး ချင်းစီဘက်မှာငါတို့ရှာ နှစ်ခု subwoofer ဘာလုပ်လဲ ဘေ့စရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့်အတင်းအဓမ္မအသံ အသံကိုနွေးထွေးစေပြီး အဓိပ္ပါယ်နှင့်အားလုံးပါဝါအထက်။ စပီကာသည်မည်သည့်မျက်နှာပြင်တွင်မဆို၎င်း၏တည်ငြိမ်မှုကိုတည်ငြိမ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည် နှစ်ခုရော်ဘာ pads လှုပ်ရှားမှုမရှိဘဲမြဲမြံစွာစောင့်ရှောက်လော့။
အသံနှင့်သက်ဆိုင်သောစက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများထွက်ပေါ်လာသည့်အခါ၎င်းသည်အသံနှင့်အတိအကျကမ်းလှမ်းနိုင်သည့်အရာတိုတောင်းသည်။ မည်သို့ပင်ဒီဇိုင်းအောင်မြင်သည်ဖြစ်စေမ။ သို့မဟုတ်ပါက၎င်းသည်ပေးထားသောစွမ်းအားသည်လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ အသံနှင့်အဓိပ္ပါယ်နှင့်ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုအရှိဆုံးခြားနားချက်ကိုလုပ်သောအရာနှစ်ခုကိုဖြစ်ကြသည်.
Tronsmart Element Pixie ထင်ရှားသည် အတိအကျ အလွန်စင်ကြယ်သောအသံကိုပူဇော်သက္ကာဘို့သည်။ ငါတို့မြင်ခဲ့သကဲ့သို့အခြားအရာများအပြင်, ဒီစပီကာ အဆင့်မြင့်နားထောင်ခြင်းအတွေ့အကြုံကိုပေးနိုင်သည် အရာမှအများအပြားမျှော်လင့်ခြင်းနှင့်အနည်းငယ်သာအောင်မြင်ရန်။ ငါတို့ချစ်တာကိုမင်းသတိထားမိလား။ The "စူပါဘေ့" ၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သောကြောင့်၎င်းသည်သူ့ဟာသူအသံထွက်စေသည်၊ ၎င်းကိုခံစားစေသည်။
အဆိုပါ Element ကို Pixie features တွေ နှစ်ခုကို double ရေတိုင်ကီ ကနက်ရှိုင်းသောဘေ့ကယ်နှုတ်တော်မူပါစေ။ အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါ၊ 15W output ကိုပါဝါ။ ဤအရွယ်အစားရှိစပီကာများ၌အခြားသူများကကမ်းလှမ်းနိုင်သည့်ပမာဏထက်နှစ်ဆနီးပါးရှိသည် ငါတို့အသံအပြည့်အဝအသံထွက်သည်နှင့်သိသာသောအရာ။ သုညပုံပျက်ခြင်းနှင့်အာဏာအားလုံး။
Tronsmart Element Pixie ကို ပိုမို၍ စွယ်စုံသုံးနိုင်သောအခြားအရာတစ်ခုမှာ၎င်းတွင်ရှိသောနည်းပညာဖြစ်သည်။ ဒီစပီကာနှင့်သဟဇာတဖြစ်ပါတယ် "True Wireless Stereo"။ ဒီနည်းပညာကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျွန်ုပ်တို့သည်စတီရီယိုအသံရရှိရန်တူညီသောစပီကာနှစ်ခုကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်။ နှစ်ဆပါဝါနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စွန့်ပစ်ခြင်းမှာအားလုံးအသံအရည်အသွေး
Tronsmart Element Pixie သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်နာရီပေါင်းများစွာစောင့်ရှောက်နိုင်သည့်စပီကာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အားသွင်းခြင်းတစ်ခုတည်းဖြင့်နားဆင်စရာမလိုဘဲဂီတကို ၁၅ နာရီဆက်တိုက်ကစားနိုင်စွမ်းရှိသည်။ အပြင်မှာတေးဂီတကိုနားထောင်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးအရာပဲ။ အရှည်ဆုံးပါတီများအတွက်နှမြောဖို့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်။
အဆိုပါ Element ကို Pixie features တွေ မျိုးဆက်သစ် Bluetooth 4.2 ဆက်သွယ်မှု။ သေချာအပြင်တစ် ဦး ကဆက်သွယ်မှု universal လိုက်ဖက်တဲ့အာမခံချက် အမြန်တွဲဖက်မှု။ ပြီးတော့ ဆက်သွယ်မှုတည်ငြိမ်မှု အရမ်းကောင်းတယ်
ငါတို့တွေ့ခဲ့ရသည့်အတိုင်း Tronsmart Element ကို Pixie t ဖြစ်လာရန်အငြင်းပွားမှုများအများကြီးရှိပါတယ်ဂီတအတွက်သင်အကြိုက်ဆုံးဆက်စပ်ပစ္စည်း။ တွန်းလှန်စျေးနှုန်းမှာအဆင့် features ။ သငျသညျ, အစွမ်းထက်လှပသောနှင့်ကောင်းသောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ Bluetooth စပီကာနှင့်အတူရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်, ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ထောက်ခံချက်ဖြစ်ပါတယ်။ Tronsmart နှင့်ပရိုမိုးရှင်းကုဒ်များကို ကျေးဇူးတင်၍ ၁၅% လျှော့စျေးဖြင့် ၀ ယ်နိုင်သည်။ ဝယ်ရန်ခလုတ်ကို နှိပ်၍ ကူးယူပါ။ HFW15ZCJ နှင့်သင်၏တေးဂီတကိုနှစ်သက်ပါ။
Tronsmart Element ကို Pixie
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » reviews » Tronsmart Element Pixie ဘလူးတုစပီကာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း